Ezona wallpapers zintle zefowuni ezine-18: 9 screen | I-Androidsis
Ezona wallpapers zintle zefowuni ene-18: 9 screen
Enye yeendlela esizibonayo kwimarike ukusukela kunyaka ophelileyo Iifowuni ezine-18: 9 shows. Ezi ziifowuni ezinezikrini ngaphandle kwesakhelo. Ke lo mlinganiselo uxhaphake kakhulu kwimarike. Nangona ukufika kwakhe kwakungekho zingxaki. Kuba bekuyimfuneko ukuba izicelo zivumelane nayo.
Kananjalo amaphephadonga kuye kwafuneka ukuba aziqhelanise nale fomathi intsha yesikrini. Ngesi sizathu, sifumana amaphephadonga ayenzelwe ngokukodwa olu hlobo lwesikrini. Apha sikushiya ngokukhetha.
Uthotho lwamaphephadonga ahlengahlengiswe kwi-18: 9 ratio. Ke ukuba unayo ifowuni enalo mlinganiso wescreen, banokuba lukhetho olufanelekileyo lokuzisebenzisa. Ukongeza, yonke le mvelaphi siyikhethileyo imele umgangatho womfanekiso.
Ke ziya kujongeka zibalaseleyo kwisixhobo sakho. Kuba into icace gca yile le fomathi ingaphezulu kokuqhelekileyo. Sele ifikile ukuhlala emarikeni. Ngakumbi nangakumbi iifowuni ziyisebenzisa kwaye ayisasebenzi ngokukhethekileyo kwisiphelo esiphakamileyo. Kukho ii-mobiles ezingabizi kakhulu ezisebenzisa le fomathi ngokunjalo.
Ungaphoswa licandelo lethu le iimifanekiso zeselfowuni
2 Kumnyama ukugcina ibhetri
Ukuba unayo ifowuni ene-18: 9 ratio, Qiniseka ukuba ufuna amaphephadonga amahle. Ngamnye unokuba nembono eyahlukileyo ngobuhle, kodwa ziimvelaphi ezithandekayo ukuzibona, ngokuyinxenye sibulela ukwakheka kwabo okuhle okanye ukusetyenziswa kakuhle kwemibala. Ke ngoko, apha ngezantsi sikushiya namaphephadonga amahle onokutshintsha ngawo ukubonakala kwefowuni yakho ye-Android. Khetha eyona uyithandayo kule meko:
Kumnyama ukugcina ibhetri
Ukuba unayo ifowuni enepaneli ye-OLED okanye ye-AMOLED, ukusebenzisa iphepha lodonga elimnyama yinto enokuba ngumdla kuwe. Ezi ntlobo zemvelaphi zivumela iipikseli ukuba zisebenze ngokuzimeleyo, ke ukuba kusetyenziswa imvelaphi emnyama, kuya kubakho iipekseli ezimbalwa ezisebenzayo kwiscreen sefowuni. Ke ngoko, wonga amandla usebenzisa iphepha lodonga. Into esisele sithethile ngayo ngaphambili, kwaye iluncedo olululo ukugcina engqondweni.
Ngethamsanqa kukho amaphephadonga amaninzi amnyama ukuba sinokuthi siqwalasele ngale ndlela, ukuba baya kusivumela ukuba sisebenzise ipaneli ye-OLED okanye ye-AMOLED yesixhobo ukugcina amandla. Apha ngezantsi unokufumana imali ezimbalwa ekufuneka uziqwalasele:
Ukuba siza kusebenzisa iphepha lodonga kwifowuni, kungcono ukuba kwisisombululo esona sinokwenzeka. Ke, Kuya kufuneka sijonge imvelaphi ekwi-HD, kumgangatho ongcono kunye namava ngawo onke amaxesha kwifowuni. Ukukhethwa kwamaphephadonga e-HD ngethamsanqa kubanzi, ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo. Ke kulula ukuyifumana eya kulungela isikrini se-18: 9 kwifowuni yakho ye-Android. Kuya kufuneka ukhethe phakathi kwezinye iindlela ezikhoyo.
Ukufumana isiphumo esingcono, esiya kuthi sinomdla kakhulu ngokubonakalayo, ukusebenzisa ii-wallpapers ze-3D zihlala zikhetha kakuhle Ukuthatha ingqalelo kwi-Android. Sifumana imali eyoneleyo yolu hlobo, esivumela ukuba siguqule ifowuni idale isiphumo esinomdla. Baphuma kokuqhelekileyo kwicandelo lamaphephadonga, kwaye ufumana into elungisa kwakhona incasa yakho.
Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba uninzi lwenu Sele unefowuni ene-18: 9 screen. Ukuba ungomnye wabo banethamsanqa, ezi wallpapers ezimibala banokuba nomdla kuwe. Ke musa ukuthandabuza ukuzikhuphela, kuba zinokuba zezona zilungileyo zinokunikwa ngumenzi wakho.
Ukuba nayiphi na yezi mali inomdla kuwe, kufuneka ucofe kuyo. Umfanekiso uya kuvulwa kwithebhu entsha kwaye ungagcina imvelaphi ngqo kwifowuni yakho. Siyathemba ukuba olu khetho ii-wallpapers zeeselfowuni ezine-18: 9 screen yiba nomdla kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ezona wallpapers zintle zefowuni ene-18: 9 screen